Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynihii Ururka Dhalinyarada OYSU Faraca Ifo oo Qabsoomay.
Shirwaynihii Ururka Dhalinyarada OYSU Faraca Ifo oo Qabsoomay.
Waxaa xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab kaqabsoomay shirwaynihii Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Soomaalida Ogadenia OYSU fariciisa xerada Ifo kahowl gala.
Shirwaynahan oo qabsooma halkii sanaba mar ayaa lagu doortaa gudi cusub oo xilka hayn doona mudada sanadka ah ee fooda inagu soo haysa hadii Alle idmo, waxaana lagu qiimeeyaa waxqabadkii gudigii hore ee xilkoodu dhamaaday.
Ugu horaynba shirka ayaa lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah, waxaana qaybta hore ee shirka maamulayay gudidii hore ee Ururka kuwaas oo soo bandhigay wax qabadkoodii mudadii sanadka ahayd ee lasoo dhaafay. Sidoo kale gudiga ayaa soojeediyay warbixin waafi ah oo ay kaga xog bixiyeen xaaladaha halganka qaybta ay iyagu hayaan.
Intaas kadib waxaa hogaanka shirka lagu wareejiyay gudigii farsamada waxayna gudigu sharaxaad kabixiyeen habka ay cod bixintu udhici doonto, iyagoo sheegay in doorashadu ay udhici doonto hab fartaag ah.
Intaas kadib waxaa toos looguda galay doorashadii waxayna xubnuhu mar labaad dib udoorteen xoghayihii hore ee OYSU Ifo mudane Maxamed Axmed, kaas oo xubnuhu ay ugarteen in uu kuhaboonyahay.
Codaynta kadib waxaa lagu soo dhaweeyay xoghayaha ururka ee dib loodoortay waxaana wuxuuna xubnaha kacodsaday in ay sidaacadnimo iyo wadaniyad kujirto uwada shaqeeyaan.
Gabagabadii kulanka ayaa kusoo dhamaaday jawi dagan iyo wajiyo farxad leh.